Iskaa wax u qabso | Sapsa
Waxaa Loo Baahan Yahay Caawiyayaasha Saaxadda Ka Baxa
Arbaco, 8 September 2021
Ma ku faraxsan tahay dugsiga berri? Waxaan nahay! Waxaan u baahanahay lix mutadawiciin ah si deg deg ah si aan hore ugu sii wadno si aan uga caawino berrito soo dejinta. Miyaad awood u leedahay inaad ku wareejiso jadwalkaaga si aad u caawiso? Waxaad kula kulmi doontaa Dr. Duke dugsiga hortiisa abaaro 6: 50-7AM si aad u qaadato calaamad iyo jaakad kadibna aad caawiso taraafikada tooska ah ee geeska laguu qoondeeyay.
Waxaan sidoo kale u baahanahay lix mutadawiciin ah dhowrka maalmood ee ugu horreeya dugsiga illaa Jimcaha soo socda ugu yaraan. Ka-tagitaankeennu si aad u wanaagsan ayuu u dhacay sannadkii hore sababtuna waxay ahayd mutadawiciintii taraafikada subaxnimadii; waxaan rajaynaynaa in aan ku xisaabtami karno dhawr goor oo hore u kacaya si ay u xidhaan oo na tusaan sida loo sameeyo!
Waa kan iskuxiraha is-qoritaanka
Waad ku mahadsan tahay farabadan!
Ururka Dugsiga St. Anthony Park
Nadiifinta Beerta Nabadda & Dugsiga: Sabti, Sebtember 25-keeda, laga bilaabo 9:00 AM-11:00AM
Waxaan u baahanahay koox ka kooban 2-3 qof si ay u maamulaan sannad-sannadeedka Read-a-thon, kaas oo carruurtu ka shaqeeyaan akhriska, akhriska, iyo akhriska badan! Kooxda Read-a-thon waxay dejin doonaan yoolalka maalgelinta roobka, waxay go'aamin doonaan mawduuc (mawduucyada hore waxaa ka mid ah Olombikada), waxay isku dubaridi doonaan jadwalka shaqaalaha dugsiga, waxayna u diri doonaan tilmaamo iyo agab qoysaska.
Waajibaadka kale waxaa ka mid noqon doona dabagalka, aqbalaadda, iyo tirinta daqiiqadaha (gudaha iyo dibedda dugsiga), go'aaminta guuleystayaasha, iyo ka shaqeynta dhacdo gaar ah oo lala yeesho Dr. Duke si loo maamuuso kuwa guuleysta.
Dhacdadani waa inay ahaato mid xasaasi ah oo dhaqan leh oo ay ku jiraan qoysaska badan ee aan ku hadlin luuqadda Ingiriiska ee bulshada dugsigeena. Dhammaan isgaarsiinta waa in lagu turjumo luuqado badan. SAPSA ayaa kaa caawin doonta tarjumaadaha iyo isgaarsiinta!
Dhawaan soo socda!
Waxaan raadineynaa 2-3 Hoggaamiyaasha Mashruuca Adeegga oo u wada shaqeeya si koox ahaan ah si aan u aqoonsanno hay'adaha aan shuraakada kula noqonno mashaariicda adeegga. Sanadkii la soo dhaafay, waxaan iskaashi la samaynay Sariirtayda aadka u gaarka ah, waayeelka St. Anthony Park iyo Reach Project. Kooxdu waxay abuuri doontaa 2-3 mashaariic adeeg oo leh hawl cad oo loogu talagalay Bulshada Dugsiga Hoose SAP iyo taariikhda dhammaadka. Waxay kaloo isku dubaridi doonaan baahi kasta oo mutadawacnimo ah oo lagama maarmaan u ah mashruuc kasta.
Marka mashaariicda la xaqiijiyo waxay u gudbin doonaan faahfaahinta Bulshada Dugsiga Hoose SAP.
Guddiga SAPSA iyo shaqaalaha/macallimiinta iskuulka ayaa ku taageeri doona waxayna kaa caawin doonaan inaad mashruuca miro dhal iyo dhammaystirto. Dhammaan isgaarsiinta waa in lagu turjumo luuqado badan. Fadlan u soo gudbi xayaysiiskaaga/xaashidaada si wanaagsan kahor taariikhda dhabta ah si guddiga SAPSA ula shaqeeyaan turjumaanno.
Haddii ay jiraan alaab -bixinno (sida bustayaal ama jaakado), samee qorshe aad alaab ugu geysato ururka la -hawlgalayaasha ah.
Tani waxay u baahan doontaa ballanqaad dhexdhexaad ah oo leh shirarka qorshaynta iyo helitaanka inta lagu jiro dhacdooyinka. Waa hab fiican oo lagu heli karo Bulshada Dugsiga Hoose ee SAP inay ku lug yeelato guddiyada weyn oo la caawiyo kuwa u baahan.
Waan ku caawin karaa !
Ma qori kartaa deeqo? Ma ku raaxaysataa meheradaha wacitaanka qabow? Miyaad leedahay xirfad gaar ah oo aad u malaynayso inay caawin doonto bulshada dugsigeena? Fadlan nala soo xiriir!